Ukwelashwa izindlela isifo periodontal Folk
Periodontitis - indolent isifo iyona ngalo ingaphakathi ngomlomo libhekene ukuvuvukala izinsini kubangelwa sebethule-plaque kanye kumiswa okuthiwa emaphaketheni, lapho bobabili izilokazane ezincane zanqwabelana. Periodontitis kuhambisana, njengoba umthetho, ukopha izinsini, eneka entanyeni ngezinyo, ziba ngcono yayo, onukayo futhi ukunambitheka.
amafomu Sinzima lesi sifo badinga ukuchitha ekwelapheni periodontitis at udokotela wamazinyo. Futhi okwakuhlalwa kuzo lapho kusaqalwa, ungakwazi ukulwa izimpawu kanye ekhaya.
ukuphathwa periodontitis amakhambi abantu
Njengomthetho, ukuphathwa kuhilela ukusetshenziswa infusions amakhambi okwelapha. Kungaba violet ezintathu anemibala, futhi wort St kaJohane, futhi amaqabunga cranberry, marigold izimbali, yimani niqonde cinquefoil, comfrey kwezokwelapha.
Ngokuvamile ekwelapheni periodontitis ekhaya kuhilela ukusetshenziswa hhayi kuphela amakhambi abathile, kodwa futhi izimali zabo. Ngokwesibonelo: kusukela amagxolo oki futhi Linden izimbali, amaqabunga Sorrel futhi galangal, ngetindlela brine kusukela neklabishi. Iyasiza ukwelapha isifo periodontal ngokusebenzisa uwoyela mouthwash sunflower, ukumnika oqinile ka green tea futhi "itiye ukhunta".
Impatho enjalo, ngaphezu kwalokho, kulekelelwa massage izinsini. Wenziwe nge swab ukotini wasigcobhoza ingxube uwoyela: * nomthidari, * nomthidari noma ulwandle ijikijolo lingase futhi namafutha kafishi. Olunye uhlobo massage kungaba amazinyo wokuhlanza powder, okubandakanya Acorus calamus. Yenza le ngxube ekhaya, kusukela emuthini wokuxubha abese kutsho kakhulu ezomile utshani nokalamusi.
Phatha periodontitis futhi ngosizo ugarliki, okuyinto nsuku zonke kuze kuphele isigamu ngenyanga, basihlikihle izinsini ogulayo. Khona-ke yenza ikhefu, ngemva kwezinsuku ezingu-5 yokwelashwa okuphindaphindiwe.
Ungakwazi uhlikihla izinsini futhi nje iminwe izandla zombili, ezihambayo kusukela phezulu kuya phansi, noHezekeli.
Kodwa kufanele sikhumbule ukuthi ukwelapha isifo periodontal kumele kuqale nge kwenhlanzeko amandla!
Ungadliwa imali kusuka periodontitis
Ukususa: oki namagxolo (.. 2 wezipuni) yamanzi abilisiwe futhi bagcizelele yehora. Khona-ke elicwengekileyo, kuba isilungele ukusetshenziswa.
Ukuze ukuphuza uhlambulule decoction esiphelele zikaphayini izinaliti ngoju. Izinaliti (2 wezipuni) is batheleka imbiza, mhlawumbe i koqweqwe lwawo, ligcwele amanzi bese ulinda kuze ngamathumba. Khona-ke, on ukushisa low, ume imizuzu 5. Sho, lemifanekiso idluliselwe gilazi tsha. Lokhu umhluzi uxubha amazinyo njalo ngemva kokudla.
A ukuphuza umhluzi u buhlanjululwe 1: 2, wabe esenezela ngesigamu ingilazi isiphuzo uju (isipuni). Phuza kufanele kube emva kokudla.
Excellent yokwelapha kanye licindezele amaqabunga Kalanchoe. Ukuze wenze lokhu, phansi esimweni mushy futhi extruded ngokusebenzisa marlechku juice. Khona-ke, namazinyo ukuxubha, kugeze decoction wabo oki namagxolo, abangele usizi Kalanchoe wetted swab, ukuphoqelela yayo gingival ohlangothini lip. Emlonyeni kubalulekile ukuthatha ezimbalwa kakhudlwana akwazi ukugcina ukotini. Konke lokhu kugcina ihora, okungcono ngesikhathi sokulala.
Sicela uqaphele ukuthi ukwelapha isifo periodontal kuncike ngokuyinhloko indlela banakekele ngalo ingaphakathi ngomlomo kuze kufike ekwenzeni izinqubo ezidingekayo njalo. Inqubo ukwelashwa ngokuvamile isikhathi, ngakho-ke sidinga isineke ukuhlolisisa.
Indlela ngokushesha ukwelapha amakhala yisisu e ingane: izincomo omama abasebasha
Ukwelashwa amalunga ekhaya kungenzeka
Uphi indawo eyingozi kakhulu emhlabeni